Umaka: ukufaka uphawu lomkhiqizo | Martech Zone
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Uma ubuze iningi labantu ukuthi libathola kuphi ababukeli balo, uvame ukuthola impendulo emincane kakhulu. Iningi lomsebenzi wokukhangisa nokumaketha uhlotshaniswa nokukhethwa komthengisi kohambo lomthengi… kepha ngabe lokho sekwephuze kakhulu? Uma uyinkampani yokubonisana noguquko lwedijithali; ngokwesibonelo, ungagcwalisa yonke imininingwane kuspredishithi ngokubuka amathemba akho amanje futhi uzilinganisele kumasu owazi kahle. Ungakwenza
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, i-2020 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, i-2020 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Izinhlangano zivame ukusebenzisa amafayili e-vector anamalayisense futhi atholakala kumasayithi ezithombe zesitoko. Inselelo iza lapho befuna ukuvuselela ezinye izibambiso ngaphakathi kwenhlangano ukufanisa isitayela nokubeka uphawu okuhambisana nezithonjana noma izimpawu ezazikhishwe ngaphambilini. Ngezinye izikhathi, lokhu kungabangelwa yinzuzo futhi… kwesinye isikhathi abaklami abasha noma izinsizakusebenza ze-ejensi zithatha imizamo yokuqukethwe nokuklama ngenhlangano. Lokhu kusanda kwenzeka nathi njengoba siqale ukusebenza
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Enye indawo engingazange ngitshale imali ukuyifaka uphawu yileli sayithi. Ngenkathi i-ejensi yami yayinophawu olukhulu engiluthandayo, futhi sisebenza nawo wonke amaklayenti ethu ekubekeni uphawu lwawo, bengingenawo nje umkhawulokudonsa wokusebenza Martech Zone sha… kuze kube namuhla. Uphawu oludala oluthi “M” ngokuyisisekelo lwalungumfanekiso olungiswe kancane engiwuthenge ngokuxhamazela ngemuva kokushintsha isizinda. Bekucacile impela, bekungamele lutho, futhi
Ukumaketha kwe-Apple: Izifundo eziyi-10 Ongazisebenzisa Ebhizinisini Lakho
NgoMsombuluko, Novemba 19, 2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Abangane bami bayathanda ukunginikeza isikhathi esinzima sokuba umlandeli we-Apple onjalo. Ngingakusola ngobuqotho konke kumngane omuhle, uBill Dawson, owangithengela idivayisi yami yokuqala ye-Apple - i-AppleTV… wabe esesebenza nami enkampanini lapho sasingabaphathi bemikhiqizo bokuqala ukusebenzisa iMacBook Pros. Bengingumlandeli kusukela manje futhi manje, ngaphandle kwe-Homepod ne-Airport, nginayo yonke into eyodwa.
Ukwakha i-Storybrand: Izifiso Ezi-7 Zokulindelwa Ibhizinisi Lakho Kuxhomeke Kuzo
NgoMgqibelo, July 21, 2018 NgoMgqibelo, July 21, 2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Cishe ngenyanga edlule, ngazibandakanya emhlanganweni wokumaketha ikhasimende. Kwakumnandi, sisebenza nomxhumanisi owaziwa ngokwenza imephu yomgwaqo yezinkampani zobuchwepheshe obuphezulu. Ngenkathi kwenziwa imephu yomgwaqo, ngangihlaba umxhwele ngezindlela ezihlukile futhi ezahlukanisiwe iqembu eza nazo. Kodwa-ke, bengizimisele futhi ukugcina iqembu ligxile emakethe ebhekisiwe. Ukuqamba kuyisu elibucayi ezimbonini eziningi namuhla, kodwa
1 2 ... 5 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 1 of 5